WARARKII WARGAYSA OGAAL EE MAANTA OO ARBACA AH 11/02/2009 | Toggaherer's Weblog
Somaliland: Digniinta Mucaaradka, Did-u-gurashada UDUB, Dalabka Akaademiga iyo Dareenka Komishanka
Hargeysa (Ogaal)- Saddexda Xisbi Siyaasi iyo Guddida Doorashooyinka Somaliland ayaa shalay si wada-jir ah Qalinka ugu duugay Heshiis nuxurkiisu yahay hawlgelinta Agabka kaydinta iyo kala saaridda dadkii is-diiwaangeliyay (Server) iyo qaabka loo waajayo.
Heshiiskan ayaa inkasta oo markii hore uu Xisbiga UDUB ka cudur-daartay in uu waqtigaa saxeexo, isla markaana uu dalbaday in waqti uu kaga soo baaraan-dego la siiyo, haddana ka dib markii Axsaabta Mucaaradka ahi isku raaceen in ay saxeexayaan ayuu Xisbiga UDUB halkaa ku saxeexay.
Munaasibaddii Saxeexa Heshiiskan oo ay ka qayb galeen Masuuliyiin ka kala socoday Saddexda Xisbiga Siyaasi, Komishanka, Akaademiga Nabadda iyo Horumarinta iyo marti-sharaf kale, ayaa ugu horrayn waxa halkaa ka hadlay Guddoomiyaha Guddida Doorashooyinka Jaamac Maxamed Cumar (Sweden) oo ku dheeraaday faa’iidada Diiwaangelinta, waxaanu sheegay in guulo waawayn laga gaadhay, balse wuxu qiray in ay jireen khaladaadka dhacay oo ah in dadku ku laba-jeer noqdaan iyo khaladaad guud oo Diiwaangelinta khusaysa.
“Server-ka waxa ku jira ilaa Milyan iyo Lix boqol oo Qof oo isku jira, una baahan in la kala saaro oo la shaandheeyo..Heshiiskeenan waxa kow ka ah shaqada sida loo qabanayo, habka loo marayo iyo in ay inoo bilaabanto. Waxay ku bilaabmaysaa, waad ogtihiin oo hawshii (Diiwaangelintu) waxay dhammaatay maalin muddo laga joogo, laakiin waxa halkan soo gaadhsiiyey ee loo fadhiyaa waa in Xisbiyadii Qaranku ay heshiis midaysan ka yeeshaan oo ka aynu maanta (shalay) u fadhino ah.
Halkaas ayaa kow inoo ah inaynu hore uga socono, wixii kale ee halkaa dhaafa waa Jadwalkii, sidii bahalkani ku dhammaan lahaa iyo sidii Dooorashadii iyo hawlihii ku xigay oo aan hawl-yarayn loo geli lahaa. ….. Markaad idinku (Axsaabta) heshiisaan, ayaanu Anaguna wax ka qaban karnaa..wixii intaa dhaafsiinani waa in Doorasho iyo kharashkii lagu qaban lahaa la, waxaas oo dhan-na waad ogaydeen oo Ilaa maalintii aanu hawshan bilownay waad ogaydeen inta goor ee wuxu dib u dhaceen oo dan uun baa dib u ridaysay, tan maanta socota oo kale ayuun bay ahayd oo Lacag aanad haynin iyo wax aan Gacantayada ku jirin markaanu ku ballan-qaadno waad dareemaysaan.” Ayuu yidhi Gudoomiyaha Komishanku waxaana uu soo jeediyay in labada maalmood ee soo socda uu hawl-galo Server-ku iyo in Xisbiyadu khuburo aqoon u leh hawsha oo la hawl-gala Komishanka ay dirsadaan.
Markaa ka dib waxa nuxurka Heshiiska oo ah go’aan uu Komishanka Doorashooyinku kaga hadlayay Server-ka, Akhriyay Xasan Maxamed (Looshade) oo akhriyay Lifaaqa Heshiiska la saxeexay. Waxana uu u dhignaa oo uu yidhi. “Komishanka Doorashooyinka Qaranku isaga oo raacaya Xeerka Doorashooyinka ee Lr. 20/2001 iyo Xeerka Diiwaangelinta Codbixiyayaasha 37/2007 iyo lifaaqiisa wax-ka-bedel iyo kaabis ee qeexaya awoodaha sharci ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Ka dib markii uu arkay hawsha baaxadda weyn leh ee dhammaystirka hawsha Server-ka ee kala saaridda wixii ku noq-noqod ah ama khaladaad dhacay, taas oo saamaysay dalka oo dhan, loona baahan yahay in laga saaro waxa khaldan oo dhan, si Diiwaangelinta Somaliland u noqoto mid xalaal ah oo waafaqsan Nidaamka Caalamiga ah. Haddaba, Komishanka Doorashooyinka Qaranku iyaga oo maanka ku haya in arrinta Server-ku saamayn ku leedahay hawlaha Doorashada, ayay shirar joogto ah, doodo iyo falanqayn socday labada maalmood ee ina dhaafay ay go’aan xubnuhu u dhan yihiin ku gaadheen qoddobada hoos ku qoran;
1-In Server-ka la hawgeliyo oo lagu bilaabo AFIS (Nidaamka baadhidda iyo kala saaridda Faraha la sawiray), in la mariyo xogaha kaydka ee sawirada Faraha, si looga saaro dadka labada goor ama in ka badan is-diiwaangeliyay, loona reebo qofkiiba Hal Kaadh Jinsiyadeed iyo Hal Kaadh cod-bixineed.
2-In xogaha dadka la diiwaangeliyey ee aan Sawirka Farta laga qaadin, waxa la marinayaa Nidaamka aqoonsiga Wejiga (FRS), si looga saaro qofka laba goor ama in ka badan is-diiwaangeliyay, iyada oo Qofka loo reebayo Hal Kaadh Jinsiyadeed iyo hal Kaadh codayneed.
3-Si loo sugo in aanay jirin dad laba jeer ama in ka badan is-diiwaangeliyay, waxa mar kale la marinayaa Nidaamka Baadhista Wejiga.
4-Dadka ka soo hadha labadaas tallaabo ee uu Qalabku akhriyi kari waayo xogaha Sawirka Wejiga, waxba kama jiraan Kaadhadhka ay qaateen. Muwaadinkii Sawirka markuu dhaafi waayay, lana mariyay nidaamkii Xeerku qeexayay waxa loo tixgelinayaa Warbixintii laga qoray.
5-Wixii aan gaadhin 16-jir maalinta codaynta ee is-diiwaangeliyay, waxa go’aan ka gaadhaya guddoomiyaha goobta Doorashada iyo goob-joogayaasha Axsaabta Qaranka. Arrintaas wacyigelin badan ayaa laga samaynaaa inta aanay Doorashadu dhicin.
6-Dadka haysta Kaadhadhka Diiwaangelinta ee la baabi’iyay waa inay ku soo celiyaan Komishanka Doorashooyinka, qofka soo celin waaya waxa laga qaadayaa tallaabo Sharciga waafaqsan.
7-In Xisbiyada Qaranku iyaga oo tixgelin siinaya muhiimadda arrintani leedahay, waa in ay Heshiis la saxeexdaan Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo ah ka aad haystaan ugu dambayn 10-ka bisha oo maanta (shalay) ah, si loo bilaabo hawsha Server-ka.”
Intaa ka dib waxa loo guda-galay hawsha loo tagay Xarunta Komishanka oo ay goob joog ka ahaayeen dhamaan dhinacyada ay khusaysaa.. waxana markaa ka maagay inuu saxeexo Xisbiga talada haya ee UDUB.
“Suurtogal ma tahay in aad waqti na siisaan oo iyada oo aanay taariikhdu dib u dhicin, isla maanta (shalay) gelinka dambe ilaa 4:00 galabnimo iyada oo aan buuq jirin Xisbi walba uu Xoghayaha guud iyo laba qof ka yimaaddo, si loo soo akhriyo oo laga soo baaraan-dego waxa meesha ku qoran.” Sidaa waxa ku dooday xoghayaha guud ee Xisbiga UDUB Jaamac, hase ahaatee, hadalkaas waxa ka biyo diiday Xisbiyada Mucaaradka ah. “Ninkii isagu wax soo hubsanayaa xaq buu u leeyahay, laakiin Anagu (Kulmiye) waxaan u malaynayaa in UCID-na nala qabtee, sidaas ayuun baanu ku saxeexaynaa.” Sidaa waxa isaga oo daba jooga dhawaaqa Xoghayaha UDUB kaga dhawaaqay Madasha Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi.
Waa sii socotay doodu waxana soo galay oo hadalka Qaatay Cismaan Cabdilaahi Cigaal (Cismaan Hindi)oo ka mid ahaa masuuliyiinta matalayay Xisbiga UDUB.
“Waxaan u malaynaa in labada Xisbi ee kale aad hore u siiseen oo ay soo akhristeen, sidaas ayay ugu dhiiran yihiin in ay saxeexaan. Laakiin, Anagu waa markii ugu horaysay ee aanu helno Lifaaqan, cadaalad-na maaha taasi. waxa aanaan ka soo baaraan-degin oo aananu akhriyin, haddii iyaga las iiyay oo ay iyagu saxeexayaan waa halkooda, balse waa in laba saacadood ilaa saddex saacadood nala siiyo oo aanu ka soo baaraan-degno weeye,.”ayuu yidhi Cismaan
Murankan kooban markii uu dhexmaray Axsaabta ayaa waxa soo galay Gudoomiyaha Komishanka Jaamac Iswiden oo sheegay in arrintu tahay Go’aan islamarkaana u marag furay Mucaaradka. “Warqad go’aan Komishan ah ayaanu u qaybinay Saddexda Xisbi oo ah kii lagu dhaqayay meesha, haddii go’aanka Komishanku aanu soconayn wixii laydiin qabanayay waxa galaya Mugdi. Waxa weeye, qodobadan waanu qaybinay, waxaana imika Heshiiskan laga shaqaynayay muddo laba toddobaad ah. halkan maanta (shalay) waxaynu u joognaa inaga oo meel u wada jeedna in hawshii Server-ku bilaabanto. Qoraalkan aanu idin siinay masiir umadeed baa ku xidhan oo qoraalka aanu idiin akhrinay ayaa gundhig u ah, Warqaddaasna Axsaabtu si siman bay u heleen.” Ayuu yidhi Gudoomiyaha Komishanku.
Mar kale waxa ku soo noqday oo qaatay hadalka Xoghayaha guud ee UDUB. “Anagu waxba ugama jeedno ee haddii aad wax saxeexayso in aad ka baaraan-degto oo aad xaraf-xaraf u akhrido ayaa qurux badan, balse haddii halkaa wax ka soo baxeen, waxay noqonaysaa ku dhufo uun Saxeexa.” Ayuu yidhi.
Xog-hayaha guud ee Xisbiga UCID ayaa sidoo kale muujiyay sida loogu baahanyahay in la fuliyo hawsha si ay hore arrimuhu ugu kala socdaa. “Maalintii hore ee aynu korodhsiimaha ka qaybgalaynay ee muddada la kordhinayay maalin adag bay ahayd, maantana maalintii ayuun bay ka kaabaysaa oo ay daba taagan tahay.
Arrinta diiwaangelinta waxaynu u galnay in aynu helno cod xalaal ah oo saafi ah in lagu kala badiyo oo lagu kala helo, dad baa inaga caawiyay oo Lacag badan inaga siiyay oo 20-Milyan oo Dollar lacag ku dhaw ayaa lagu bixiyay, in ay bilaash ku lunto oo hawshii Qaranka, Dadka iyo cid walba gashay waa arrin aan fiicnayn..arrintani bilow bay inagu tahay, khaladaad badan baa ka dhacay, khaladaadka dhacayna cid waliba qayb bay ku leedahay. Waxse aynu isku dayaynaa in aynu saxno. Ha loo guntado oo Komishanku ha u diyaar-garoobaan hawsha bilowgeedii.” Ayuu yidhi Xoghayaha UCID talaata Codleh.
Cabdi Yuusuf Ducaale Boobe oo u hadlay Akademiga nabada ayaa u soo jeediyay Axsaabta waxana hadalkiisa ka mid ahaa oo uu yidhi, “Waxaanu Masuuliyiinta Axsaabta ka codsaynayaa in aanay markay halkan (Shirarka noocaas) ah imanayaan aanay la iman dan Xisbi ee ay iyaga oo Islaamaha wadhatada ah, dadka Yurub Barafka jooga iyo dadkaa faraha badan ee iska soc-socda ee Xamaalanaya ay aayahoodii gacanta ku hayaan, nin walba marka uu Qalinka qaadayo ee uu halkan soo galayo dareensanaadaa..horta saddexda Xisbi waxa laga rabaa in Garoonka aad ku ciyaaraysaan in qodaxda ka gurataan.”
Sidaas ayaana lagu soo gaba-gabeeyay heshiiska.
Dooda mucaaradka ee waqtiga doorashada iyo diyaar garowga UDUB
“Haddii Doorashadu waqtigeedii ku dhici waydo waxa iman doonta xaalada cusub oo hor leh” Axmed Siilaanyo
Hargeysa (Ogaal) – Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ka digay in mar kale doorashooyinku dib ugu dhacaan wakhtigii loo qorsheeyay.
Gudoomiye Siilaanyo oo ka hadlay xarunta Komishanka shalay ka dib markii Axsaabtu wadda jir u saxeexday heshiis laga gaadhay waxa laga yeelayo dadka hal mar wax ka badan isu diiwaan-geliyay doorashooyinka.
Gudoomiyaha Kulmiye waxa uu tilmaamay muhiimada hawsha diiwaan-gelinta oo uu sheegay in kaalinta ugu weyn ay ka qaateen Shacbiga reer Somaliland oo uu ugu mahad-naqay. “Inaga walaac iyo shaki badan ayaa inagaga jiray in Diiwaangelintu dalkeena ka hirgeli doonto, aad baynu dood uga soo marnay. Waxaynu ku calool-adaygnay, duniguna inaga caawisay in aynu Diiwaangelintaa ku dhaqaaqno. Waa dhab oo Deeq-bixiyayaashu gacan wayn bay inoo geysteen oo Dhaqaale leh, farsamo leh oo dhinac walba leh, fulinta hawshaa Diiwaangelinta.
Laakiin, aynu xusuusnaano oo aynu ogaano in hawsha iyo kharashka ka gashay Shacbi-weynaha reer Somaliland iyo Qaranka, odhan maayo oo Xukuumadda ka hadli maayo, balse waxaan ka hadlayaa Qaranka inta ka gashay waxay kun jeer ku laban-laabmaysay inta ka gashay Deeq-bixiyayaasha..taasi waxay ahayd dedaal iyo tallaabo ay umadda reer Somaliland qaadeen. Ilaahay waxaan ka baryayaa haddii xamaasaddii badnayd inala gaadhay in dad badani soo baxaan, in qaabkaa maanta loo dhigay iyo Heshiiskaa la wada saxeexay in wixii khalad ku jiray uu ka saaro.” Ayuu yidhi Axmed Siillaanyo waxaana uu intaa ku daray isaga oo hadalkiisa sii watana uu yidhi.. “Waxa kale oo aan doonayaa in aan culays saaro, waxaanu ka codsanaynaa oo aanu ku dhiirigelinaynaa Guddida Doorashooyinka in, waynu ognahay inta jeer ee Doorashadu dib u dhacday ee waqtigii dhaaftay, waxay umaddu u dheg-taagaysaa oo ay sugaysaa in ay timaaddo doorasho waqtigeedii ku dhacdaa oo aan sababo loo raadin in ay dib u dhacdo Doorashadu.
Maanta umaddu ma xamilayso, dadkuna ma aqbalayo Doorasho dib u dhacda. Waxaanu ku guubaabinaynaa Komishanka iyo Qarankaba in Doorashadu waqtigeedii ay ku dhacdo. Sababtoo ah, haddii Doorashadu waqtigeedii ku dhici waydo waxa iman doonta xaalada cusub oo hor leh, waayo, waqtigii dhammaaday barigii hore shardigii aynu ku kordhinay wuxuu ahaa in muddada dambe aan laga gudbin, haddii ay tii timaaddo Qalalaase hor leh ayaynu galaynaa. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa, Anaguna aanu idinkula shaqaynaynaa in Doorashadu waqtigeedii ku dhacdo.”
Xoghayaha guud ee Xisbiga UDUB Jaamac Cismaan Faarax oo isaguna kulankaa ka hadlay ayaa sheegay in ay Xisbul-xaakim ahaan ka go’an tahay in doorashadu wakhtigeeda ku dhacdo. “Waxa Anaga Xisbi-xaakim ahaan naga go’an oo aanu diyaar u nahay in Doorashadu waqtigii iyo taariikhdii loogu talo-galay aanay haba-yaraatee dib uga dhicin oo ay qabsoonto, wixii dhinaca Ilaahay ka yimaadda mooyaane. Balse waxaaad dhinacayaga ka filataan halkaas ma jiraan, sidaas ayaa inoo ballan ah” ayuu yidhi.
Gudoomiye ku xigeenka Xisbiga UCID Aadan Maxamed Mire (Waqaf) ayaa sidoo kale Komishanka ku booriyay inay qabtaan doorashada Wakhtigii loogu tala-galay.
“Guddiga Komishanka Qaranka waxaan ku hambalyaynayaa go’aankaa iyo hawshaa ay qabteen..Waxase aan adkaynayaa xilligii aynu qabsanay in Doorashadu dhacdo ee 29-ka March 2009 in ay ku qabsoonto oo lala yimaaddo nidaamkeedii, isla markaana habeen iyo maalinba loo soo jeedo oo waqtiga inoo hadhay la agaasimo in lagu fuliyo.”
Xudur: Dagaal Culus oo dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada Dawladda TFG
Xudur (W.Wararka/Ogaal)- Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay, tiro inta ka badanina way ku dhaawacmeen dagaal shalay galab ka dhacay deegaamo a tirsan gobolka Bakool.
Dagaalkan oo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Kumeel-gaadhka ah ee Soomaaliya, waxa uu bilaabmay abaaro 4:00 galabnimo ee shalay, kaasoo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Dhiilo oo ku yaala agagaarka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Siday faafiyeen qaar ka mid ah shabakaddaha wararka Soomaalida, waxa la gooyay dhammaan isgaadhsiintii magaalada Xudur, iyadoo ciidanka dagaalka la galay Al-Shabaab ahaayeen kuwo dhowaan kasoo guuray magaalada Baydhabo ka dib markii lagala wareegay gacan-ku-haynta magaaladas. Warku wuxuu intaa ku daray, in dagaalkaasi qaboobay fiidnimadii xalay, si dhab ahna looma oga inta uu le’eg yahay khasaaraha ka dhashay, wuxuuna baqdin iyo sas ku abuuray dadka ku dhaqan gobolkaas, gaar ahaan magaalada Xudur iyo degmada Waajid.
Maalmihii u dambeeyay waxaa halkaas ka taagnaa saansaan colaadeed oo u dhexeeyay dhinacyada shalay ku diriray halkaas. Kooxda Al-Shabaab iyo urur-diimeedyo kale, ayaa caddeeyay inay ka soo horjeedaan dib-u-heshiisiinta haatan socota isla markaana qaadacay inay aqoonsadaan dawladda cusub ee Sheekh Shariif, taasoo ay sheegeen inay dagaal kala hortagayaan.
Nairobi (VOA/Ogaal)- Masuuliyiinta Somaliland ayaa shaaca ka qaaday inay beeninayaan warar sheegayay in inka badan dersin dad ah oo u dhashay dalka Maraykanka loo xidhay eedaymo suuragal noqon kara oo lagu xidhiidhanayo argagixisada.
Sida lagu faafiyay shabakada wararka Idaacada VOA-da wararkasi waxay shidaalka ku shubeen in 20 Soomaali rag ah oo ku noolaa Maraykanka ay tabobaro siiyeen ururka al-shabaab si ay markaa xasilooni-darro ugu ridaan Somaliland iyo qaybo kale oo Soomalaiya ah.
Maqaalka ay Idaacada VOA faafisayna wuxuu u dhignaa sdan: “Waraysi ay Idaacada VOA la yeelatay Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Cabdillaahi Ismaaciil Cali (Ciro) ayuu ku sheegay in masuuliyiinta amaanka garoonka diyaaraduhu xidheen dhawr qof oo Soomaali ah bishii la soo dhaafay, ka dib markii ay garoonka diyaradaha Hargeysa ka soo degeen iyaga oo ka yimi dhinaca koonfurta, gaar ahaan Muqdisho.” Ayaa ka mid ahaa maqaalka VOA faafisay.
“Wasiirku wuxuu sheegay in laba ka mid ah dadka la xidhay looga shakiyay inay iyagu soo tahriibyeen gantaalaha lidka diyaaradaha oo Somaliland iyagu keeneen. Hase ahaatee, wuxuu sheegay in labadaa nin midkoodna aanu ka iman Maraykanka, isla markaana labadoodaba la sii-daayay iyada oo aan la xukumin. “Ka dib baadhitaan la sameeyay, laba ama saddex maalmood ka dib, way sii daayeen boolisku,” ayuu yidhi. “Waxay ka yimaadeen Muqdisho, balse kamay imanin Maraykanka.” Ayuu yidhi.
Warar hore oo ka yimi Somaliland ayaa sheegay in 11 dhalinyaro ah laga xidhay garoonka diyaaradaha, kuwaasoo dhamaan ahaa dad sitay dhalashada Maraykanka. Dhawr maalmood ka dibna, mid ka mid ah warbaahinta maxliga ah ayaa shaaciyay in weerar lagu qaaday guri ku yaala Hargeysa, kana soo xidhay afar qof oo rag Soomaali ah iyo haweenay looga shakiyay inay maleegayeen weeraro argagixisanimo.
Wararku waxay sheegeen in afarta nin ay waqtigaas uun ka tageen Maraykanka. Wasiirka Arrimaha Gudaha Cirro wuxuu sheegay inaanu wax macluumad ah ka haynin weerarka guriga oo aanu ka hadli karayn.
Madaxweynaha fadhigiisu yahay magaalada Washington ee Golaha Somaliland-America Rashiid Nuur, ayaa sheegay inuu aaminsan yahay inaanay dawlada Somaliland cadaynayn dhamaanba waxyaabaha ay ka ogtahay arrintan.
“Sida aad sheegtay, run ahaantii way adag tahay in la helo sawirka dhabta ah ee la xidhiidha cidda ay ahaayeen dadkani iyo aqoonsiyadooda. Laakiin, siday sheegayaan dad dawlada ka tirsan iyo dadka kaleba, qaar ka mid ah dadkaasi waxay haystaan degenaanho Maraykanka ah,” ayuu yidhi Mr Nuur.
Masuuliyiinta la-dagaalanka argagixisada reer galbeedku waxay sheegayaan inay baqdin badan ka qabaan in ururka al-shabaab uu kaamam tabobarrada ah ku leeyahay Soomaaliya, isla markaana halkaa lagu tabobaro dad ka taga Maraykanka, Kanada, Yurub iyo Sucuudiga, maadaama in ka badan 20 dhalinyaro Soomaali ah oo ku noolaa Maraykanka Gobolka Minnesota la aaminsan yahay inay tageen Soomaaliya 18-kii bilood ee la soo dhaafay.”
Sh. Shariif: Maxaa u qabsoomay muddadii uu joogay Muqdisho?
Muqdisho (W.Wararka/Ogaal)- Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sh. Axmed oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in muddadii uu joogay halkaas ay wadahadalo dhexmareen xubno ka mid ah kooxaha ka soo horjeeda dawladdiisa.
Sheekh Shariif oo shalay dib ugu laabtay dalka Jabuuti, waxa uu tilmaamay inuu kulamo la yeeshay hogaanka Maxkamaddaha ee gudaha Soomaaliya, odayaasha dhaqanka Muqdisho, siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, kuwaasoo uu xusay inuu kala hadlay arrimaha dib-u-heshiisiinta iyo sidii loola jaanqaadi lahaa isbedelka cusub ee Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in dhinacyadaa uu la kulmay ay isla garteen in laga wada qaybgalo dhismaha dawladdiisa, si xasilooni loogu soo celiyo Soomaaliya oo labaatankii sannadood ee u dambeeyay colaado ka jiraan.
Sheekh Shariif waxa uu ku faanay in dhinacyada ay kulamada yeesheen ay isku afgarteen kuna guulaysteen inay dhisaan guddiyo isku-dhaf ah oo ka shaqeeya amniga iyo wacyigelin la xidhiidha sidii kooxaha dawladdiisa ku kacsan loogu baaqi lahaa raacista hanaanka nabadda.
Sheekh Shariif oo aan weli magacaabin Raysal-wasaarihii uu markii la doortay sheegay inuu si dhakhso ah u soo magacaabayo, waxa uu shalay ka duulay Madaarka Muqdisho isaga iyo wefti uu hogaminayo oo u kicitimay Jabuuti. Isla markaana waxaa la filayay inuu si degdeg ah ugu dhawaaqo magacaabista Ra’iisal Wasaarihiisu ka uu noqonayo si loo soo dhiso Xukuumadda cusub ee Soomaaliya.